11/22/13 ~ Myanmar Forward
ရှမ်းလူမျိုးစုရေးရာ အဖွဲ.ချုပ်(ကချင်ပြည်နယ်)၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
Posted by drmyochit Friday, November 22, 2013, under ထုတ်ပြန်ချက် | No comments
အမေရိကန် လက်ရွေး စင် ဘော လုံး သ မား ဟောင်း များ ဘော လုံး အားကစား နည်း စနစ်များ ပိုမို တတ်ကျွမ်း စေရန် မြန်မာ လူငယ် အားကစား သမား များအား လာရောက် ပြသ
Posted by drmyochit Friday, November 22, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
အမေရိကန် လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ဟောင်းများ ပါဝင်သည့် အားကစား သံတမန် အဖွဲ့သည် ယနေ့ ညနေ ၃နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကမာရွတ် မြို့နယ် သထုံလမ်းရှိ တက္ကသိုလ်များ အားကစား ကွင်း၌ ဘောလုံး အားကစား စွမ်းရည်ပြသ ကြပြီး အလားတူ ဘောလုံးစွမ်းရည် ပြသခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်တွင် မွန်ပြည်နယ်၌ ထပ်မံပြသ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမေရိကန် အားကစား သံတမန် အဖွဲ့တွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့် ပြိုင်ပွဲများ၌ နည်းပြ လုပ်သက် နှစ် ၄ဝကျော် သက်တမ်းရှိ နည်းပြ ဂျေဟော့မန်း၊ အမေရိကန် အမျိုးသား လက်ရွေးစင် အဖြစ် ပွဲပေါင်း ၁၆၄ပွဲ ကစားထားကာ ကစားပွဲ စံချိန်တင်ထားသူ ကော်ဘီဂျူန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံနှင့် အိုလံပစ် တတိယ ဆုရှင် အမေရိကန် လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမားဟောင်း လော်ရီဖယ်ယားတို့ ပါဝင်သည်။
၎င်းအဖွဲ့သည် လူငယ်ဘောလုံး အားကစားသမား များနှင့် တွေ့ဆုံ ၍ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ကြကာ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်များကိုလည်း သင်ကြား ပြသ ပေးကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် အမေရိကန် ကားကုမ္ပဏီ ချက်ဗိုလက်နှင့် One World Football Project တို့မှ ထိုင်ဝမ်မှ ထုတ်လုပ်သည့် Chevrolet ဘောလုံးအလုံး ၅ဝဝ ကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်ရှိ လူငယ် ဘောလုံး အားကစားသမား များအတွက် ပေးအပ်လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ကာယင်းအခမ်း အနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရစ်မစ်ချယ်နှင့် အားကစား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တက်ရောက် မည် ဖြစ်သည်။
လှူဒါန်းမှု အစီအစဉ်တွင် မွန်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့ အပါအဝင်အခြားပြည်နယ်များသို့ Chevrolet ဘောလုံးအလုံး ၅ဝဝဝ စုစုပေါင်းအလုံး ၅၅ဝဝ တို့အား လှူဒါန်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန် အားကစား သံတမန်အဖွဲ့ လာရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ''မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောလုံး အားကစား ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဒီလိုဘောလုံး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေအတွက် နည်းစနစ်၊ ကစားနည်းတွေကို သိရှိတတ်ကျွမ်းစေရန် လာရောက် ဆောင်ရွက်ပြသ ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီက နည်းစနစ် တွေလည်း အများကြီးရမှာပါ။ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဘောလုံး အကျော်အမော်တွေလာရောက်ပြသ တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးတွေ အတွက် များစွာ အထောက်အပံ့ ရမှာပါ။
်မာ ဘောလုံး အခြေအနေဟာလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့် တိုးတက်လာ တာတွေ့ရပါတယ်။ အခုလည်း ဆီးဂိမ်းအတွက် အများကြီး လုပ်နေကြ တာလည်း မြင် တွေ့ပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ ယခု အစီအစဉ်ကဲ့သို့ ဘတ်စကက် ဘောမှာလည်း လက်ရှိပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် လာလုပ် ဖို့လည်း ရှိပါတယ်''ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံရုံးမှ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အရာရှိဖြစ်သူ အဲရစ်ခ် ဗွီးအီးအိုက်စ်လီက ပြောကြားသည်။
ဖျက်သင်္ဘောများ ပိုမို ဖြည့်တင်းသွားရန် ဂျပန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စီစဉ်
Posted by drmyochit Friday, November 22, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် တရုတ်နိုင်ငံက ပင်လယ်ရေ ကြောင်း ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာသောကြောင့် ဖျက်သင်္ဘောများ ပိုမို ဖြည့်တင်းသွား ရေး အဆိုပြုချက် တစ်ရပ် တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ် အရ သိရသည်။
ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန် ရှိသူများသည် အစိုးရ၏ ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန် သုံးသပ်ချက်တွင် ပါဝင်သော ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆိုင်ရာ စီမံချက် တစ်ရပ်အား ရေးဆွဲ ပြုစုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပြန်လည်သုံးသပ် မှုနှင့် ပတ်သက်သော အစိုးရ အဖွဲ့ အတည်ပြုချက်သည် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပေါ်ထွက်လာဖွယ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ အရ ဖျက်သင်္ဘော ၄၈ စင်း ဖြည့်တင်းသွားရန် တောင်းဆိုထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဂျပန်သင်္ဘောများကို ရန်သူ့ ရေငုပ် သင်္ဘောများနှင့် တော်ပီဒိုများ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် အသေးစား သင်္ဘောများ အပါအဝင် သင်္ဘော ၁ဝ စင်းခန့် ပိုမို ဖြည့်တင်းသွားလို ကြောင်းသိရသည်။
ဂျပန် တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် တင့်အရေအတွက်ကို ၇ဝဝ မှ ၃ဝဝ အထိ လျှော့ချသွားရန် အဆိုပြုလျက် ရှိပြီး ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနသည် ၎င်းတင့်များကို နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ဟော့ကိုင်းဒိုးကျွန်းနှင့် အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ကျူရူးကျွန်း တွင် အဓိက တပ်ဖြန့် ချထားလိုကြောင်းနှင့် လက်နက် တပ်ဆင်ထားသော ဘီးတပ် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် အသစ် အစီး ၂ဝဝ ခန့် တပ်ဖြန့် ချထားသွားရန်လည်း မျှော်မှန်း ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by drmyochit Friday, November 22, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
Credit >> Health
GERMAN CLASICO, GLITTERED WITH STARS, SET FOR SATURDAY
Bayern Munich travels to face bitter rivals Borussia Dortmund on Saturday inacontest that pits Germany’s two giants against each other in an eagerly anticipated rematch of last year’s UEFA Champions League Final.
Dortmund comes into the week 13 match, now known as the “German Clasico,: in second place in the German Bundesliga table with 28 points, four behind reigning treble champions Bayern at the summit. They have split the last four Germany Bundesliga titles, with Bayern earningasandwich of trophies before and after Dortmund’s 2010-11 and 2011-12 glory.
Now under first-year manager Pep Guardiola, the men from Munich are in sterling form with four wins on the trot. They’ve won 26 of their last 29 league matches dating back to last season, and last time out they setarecord by extending their unbeaten streak to 37 games. The Bavarian’s last loss? An April 2012 trip to Dortmund in which Dortmund’s deadly striker Robert Lewandowski bagged the only goal of the match? In fact, Jurgen Klopp’s side has four wins and two draws from their last six league matches with Bayern.
Credit>> soccer(Daily mail)
အလိုလို သက်သာသွားသော ရောဂါ သို့မဟုတ် ပခုံးကပ်ခြင်း၊ ပခုံးနာခြင်း (Frozen Shoulder)
Posted by drmyochit Friday, November 22, 2013, under ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး | No comments
ပခုံးကပ်တာ၊ ပခုံးနာတာ၊ ပခုံးခိုင်တာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြတတ်တဲ့ Frozen Shoulder ဟာ အဖြစ်များပါတယ်။ အသက် ၄၀-၆၀ ကြား အရွယ်တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပခုံးတင်မက လက်မောင်းတွေ အထိပါ ပျံ့နှံ့ပြီး နာတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျ မသိကြပါဘူး။ အများယူဆတာကတော့ ပခုံးအရွတ် (Capsule) က ရောင်လာပြီး ကျုံ့သွားတော့ လှုပ်ရှားမှုက ပုံမှန် မဖြစ်တော့တာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ပခုံးနာတာက အတော် ဆိုးပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ညအိပ်လို့တောင် မရအောင် နာတတ်ပါတယ်။ လက်က ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ မရတော့ ကျောကုတ်လို့လည်း မရ၊ ခေါင်းဖြီးလို့လည်း မရပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ ဆံပင်တွေ ထုံးလို့မရ၊ ပြင်လို့မရနဲ့ ပိုဆိုးပါတယ်။ အင်္ကျီဝတ်ပြီ ဆိုရင်လည်း လက်ထိုးရခက်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက အဆင့်သုံးဆင့် ရှိပါတယ်။ အဆင့်တစ်ခုကို ၆ လ-၈ လလောက် ကြာပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဒီရောဂါဖြစ်ရင် တစ်နှစ်ခွဲ- သုံးနှစ်လောက် ကြာပါတယ်။ ဒီရောဂါက အများအားဖြင့် ပခုံးတစ်ဖက်မှာ စဖြစ်တာ များပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ပခုံးရဲ့ ညာဘက်တစ်ဖက်မှာ စဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်လာပြီဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ပခုံးက ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ပျောက်ပြီးရင် နောက်တစ်ဖက် ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ချက်ချင်း ပြန်ဖြစ်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက် ကံဆိုးတဲ့ လူနာတွေကျတော့ ပခုံးနှစ်ဖက်စလုံး ပြိုင်ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် အတော်လေး ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။
ရောဂါ ပထမအဆင့်မှာ ပခုံးအဆစ်က နာတယ်၊ ခိုင်လာတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းနာတာ ပိုဆိုးလာတယ်၊ ပခုံးက ပိုကပ်လာတယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကို Stationary Stage လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကျတော့ ပခုံးက ပိုလည်း နာမလာဘူး၊ ပိုလည်း ဆိုးမလာဘူး၊ ပိုလည်း ကပ်မလာဘူး။ ရောဂါက တန့်နေတယ်။ တတိယအဆင့်ကိုတော့ Resolution Stage လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ အဆစ်က နာတာ၊ ကပ်တာ တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားပြီး ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ရင် လူနာအများစုမှာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း သူ့အလိုလို ပြန်သက်သာသွားတဲ့ ရောဂါလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆရာတို့အနေနဲ့ ဒီလိုပခုံးနာတဲ့၊ ကပ်တဲ့ လူနာတွေ တွေ့ရင် နာတဲ့ နေရာကို စမ်းကြည့်ပေးရပါတယ်။ တခြားရောဂါလည်း ရှိနိုင်တာကြောင့် တခြားရောဂါတွေနဲ့ မမှားအောင် သေချာ စစ်ဆေးရပါတယ်။ ပခုံးနာ၊ ပခုံးကပ်တဲ့ ရောဂါနဲ့ မှားတတ်တဲ့ ရောဂါတွေက ပခုံးအရွတ် ကျောက်တည်တာ၊ ပခုံးအရိုး နည်းနည်းပါးပါး ကျိုးတာ၊ လည်ပင်းအာရုံကြော ညပ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ပခုံးနာရင် နှလုံးရောဂါနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ရင် လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ ပခုံးနာတာ ပြတတ်လို့ပါ။ ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ ဒီရောဂါဖြစ်တဲ့ လူနာတွေက အလိုလို ဖြစ်တာများပါတယ်။ တချို့လူနာတွေကျတော့ နည်းနည်းပါးပါး ထိမိခိုက်မိဖြစ်ပြီး ပခုံးနာလာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါရှင်တွေက ဒီရောဂါ အဖြစ်များပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာသည်တွေရဲ့ ၁၀-၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဒီရောဂါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပုံစံနဲ့လာရင် သွေး၊ ဆီး စစ်ရပါတယ်။ ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဓာတ်မှန်ထဲမှာ ဘာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ အရိုးနည်းနည်းပါးတာလောက်ပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က တခြားပြဿနာတွေများ ဖြစ်နေသလား ဆိုတာ သေချာအောင် စစ်ကြည့်ရတာပါ။ ကုသမှုအနေနဲ့ကတော့ အနာသက်သာဖို့အတွက် သောက်ဆေး ပေးရပါတယ်။ ပခုံးအဆစ်က နာနေပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုကိုတော့ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ခိုင်းရပါတယ်။ ငြိမ်နေရင် ပခုံးက ပိုကပ်သွားတတ်တယ်။ အရိုးအကြော ပြုပြင်ပေးမှု (Physiotherapy) လုပ်ပေးရင်လည်း လူနာအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ရေနွေးအိတ်ကပ်တာ၊ သောက်ဆေး ပေးတာတွေ လုပ်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မသက်သာဘူးဆိုရင် အဆစ်ထဲကို ဆေးထိုးပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နာတာ အတော် သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ လှုပ်ရှားမှုလည်း မြန်မြန်ရလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူတွေမှာတော့ ဆီးချိုတက်နေရင် ဆေးထိုးလို့ မသင့်ပါဘူး။ ပိုးဝင်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ပိုးမဝင်အောင် သေချာဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့လူနာတွေကျတော့ ပခုံးက သိပ်ကပ်နေပြီး လှုပ်ရှားလို့ မရဘူးဆိုရင် မေ့ဆေးပေးပြီး ပခုံးအရွတ်တွေကို ဆွဲလှည့်တဲ့နည်း (Manipulation) ပေးရပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့လည်း တချို့လူနာတွေက သက်သာပေမယ့် တချို့လူနာတွေက မသက်သာပါဘူး။ နောက်တစ်နည်းက ဆရာတို့ လုပ်လေ့မရှိပေမယ့် Arthroscopy နည်းလို့ခေါ်တဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်လေ့ရှိတာက အဆစ်ထဲ မှန်ပြောင်းထည့်ပြီး ကျပ်နေတဲ့ အရွတ်ကို ဖြတ်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက စိုးရိမ်စရာ မရှိပေမယ့် ဖြစ်လာရင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကို သည်းခံလိုက်ရင် သူ့အလိုလို သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
Ref: 7Day Shopping Guide posted on Yatanarpon.com.mm
မျက်စိယားတာက နေ့တိုင်း ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ မျက်စိယားယံရတဲ့ အကြောင်းရင်းက နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ သာမန်ပါပဲ။ မျက်စိထဲကို ဖုန်တွေ၊ သဲတွေ ဝင်တယ်။ မျက်စိက ယားလာလို့ လက်နဲ့ ပွတ်လိုက်တယ်။ ဖုန်တွေ၊ သဲတွေ ထွက်သွားအောင် မျက်စိကို သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ အားရပါးရ ဆေးပေးလိုက်ရင် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိရောဂါ ဝေဒနာ (Allergic Eye Disorder) ရပြီး မျက်စိယားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရေနဲ့ဆေးလည်း မပျောက်ပါဘူး။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိယားရင် သာမန် မျက်စနီရာကနေ မျက်စိမှုန်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အတော် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ တခြား ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ (ဥပမာ- ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်တာ၊ အရေပြား ရောင်ရမ်းတာ) တွေလိုပဲ ဒီရောဂါကလည်း တစ်သက်လုံး မပျောက်တဲ့ ရောဂါမျိုး၊ ရာသက်ပန်ကုဖို့ လိုတဲ့ ရောဂါမျိုးပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိဝေဒနာဖြစ်တာ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ဆရာ့ဆီကို လာပြတဲ့ လူနာတချို့တော့ ရှိပေမယ့် အဲဒီအထဲက တချို့လူနာတွေဆိုရင် အသက်ကြီးလာတာနဲ့ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတာမျိုးတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း အသက်ကြီးမှ ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်လာပြီး ဆေးနဲ့ ထိန်းနိုင်တဲ့ အဆင့်မှာတင် ရပ်သွားတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိယားရင် မျက်စိက ရိုးရိုးနီရုံပဲ နီတယ်၊ မျက်ခွံကို လှန်ကြည့်လိုက်ရင် အနီစက် (Papillae) တွေ အများကြီး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင် မျက်ကြည်လွှာ ပတ်လည်မှာ သွေးကြောတွေက နီရဲနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မျက်ကြည်လွှာဆိုတာ ကြည်လင်ပြီး ထိုးဖောက် မြင်နိုင်ရမယ်။ Clear and Transparent ဖြစ်နေရပါမယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်ဘဲ သွေးကြောတွေ ဝင်လာတဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင် မျက်စိက မှုန်သွားတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိနီလာ၊ ယားလာရင် ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တဲ့အတွက် H2 Receptor Blocker ဆေးဖြစ်တဲ့ Cromal ဆိုတဲ့ မျက်စဉ်းဆေးကို ပေးရပါတယ်။ ဒီဆေးကတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိပါဘူး။ ဒီထက် ပိုဆိုးလာတဲ့ အဆင့်မှာ စတီးရွိုက် မျက်စဉ်းဆေးကို ပေးရပါတယ်။ ဒီဆေးကတော့ မျက်စိအတွင်း ရေထုဖိအား (Intraocular Pressure) လည်း တက်ချင် တက်နိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိသလို မျက်ကြည်လွှာ ပေါက်တာ (Cornea Erosion) လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတာကြောင့် မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှ ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ရင်လည်း ဘာမီတွန် (Burmeton) လို ဆေးမျိုး သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒီလို ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိဝေဒနာ ဖြစ်ရင် တစ်သက်လုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ရာသက်ပန် ကုသမှု ခံယူရမယ်ဆိုတာ လူနာတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိယားတာက ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်လဲဆိုတာက ပြောရခက်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါဆိုရင်လည်း ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ဘာနဲ့ မတည့်တာလဲဆိုတာ မသိကြသလိုမျိုးပါပဲ။ စစ်ဆေးဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်လို့တော့ ရပေမယ့် လူနာကိုပဲ သတိပေးထားရပါတယ်။ ဥပမာ ရာသီဥတုကို ကြည့်ရင် ဘယ်ရာသီမှာ ပိုဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုတာကို သတိထား ကြည့်ရပါတယ်။ တချို့ လူနာတွေဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာ ပိုဖြစ်တတ်သလို တချို့ လူနာတွေကျတော့ ညနေပိုင်းမှာ ပိုဖြစ်တတ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သတိထားခိုင်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက အစားအသောက်ကို သတိထားခိုင်းပါတယ်။ မှို၊ ပင်လယ်စာ စားရင် ဖြစ်သလား၊ ဘယ်အစာစားရင် ပိုဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာ သတိထား ကြည့်ခိုင်းရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မျက်ကပ်မှန် တပ်တာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန်ကို လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း (Material) နဲ့ မတည့်ရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အမေရိကန် လက်ရွေး စင် ဘော လုံး သ မား ဟောင်း များ ဘေ...
GERMAN CLASICO, GLITTERED WITH STARS, SET FOR SATU...